Muxuu ka dhigan yahay mdibka madow ee wajiga la marsado,muxuu se meel ka dhac u yahay? |
Muxuu ka dhigan yahay mdibka madow ee wajiga la marsado,muxuu se meel ka dhac u yahay?
Ra’iisul Wasaaraha dalka Canada, Justin Trudeau ayaa raalligelin ka bixiyay in uu marsaday midabka “wejiga bunniga ah” ee gala ee uu kusoo bandhigay iskuul gaar ah, kaas oo 20 sano ka hor uu dhigan jiray.
Mr Trudeau qudhiisa ayaa qirtay in sawirkaasi uu ahaa mid cunsuriyad ka muuqato,balse waxaa sawiro laga qaaday labo jeer oo kale isaga oo wajiga marsaday calaamadda madow ah.
“wejiga bunniga ah” wuxuu si cad u qeexayaa marka qof uu midabka wejigiisa baddalo oo uu madoobeeyo si uu ugu ekaado midabka qof kale.
Wajiga oo la marsado calaamad madow taariikh ahaan waa dhaqan soo jiray 200 oo sano ka hor – waxaana loo malaynayaa inuu sanadkii 1830 ka bilaabmay New York.
Waxaa inta badan lagu tilmaamaa marka qofka jirkiisu cadyahay uu korkiisa ku xardho midib madow oo u eg qof madow ah.
“wejiga madow”, waa dhaqan waa mid ay dadka caddaanka ku maadsan jireen waxaana fikir ku baahay Mareykanka iyo Yurub qarniyadaasi.
Horaantii qarnigii 19 , jilayaasha caddaanka ah ayaa waxay jiliinka sameyn jireen iyaga wajiga uu u marsan yahay midibka madowga ah .
Waxa ay dhigi jireen majaajilo iyada oo lagu maadsanayo dadka madowga ah ,tusaale lahjadooda iyo sida ay u hadlaan.
Xilligaasi xitaa dadka madowga ah looma ogolayn in ay masraxyada soo istaagaan iyada oo la eegayo midibkooda.
Qarnigi 20aad bartamihiisii jilayaasha madowga ah looma ogoleyn in ay jilaan boosaska muhimka ah.
Qaybaha filimka looga hadlayo dadka madowga ah waxaa jili jiray dad cadaan ah oo wajiga marsaday midib madow ah.
Jilaa si cajiib ah ugu dabaaldegay dhalashadiisa
Maxaabiis si yaab leh u baxsatay oo la baadigoobayo
Dhaqankan ayaa masraxyada iyo madadaalooyiinka ka sii socday intii badnayd qarnigii 20aad.
Warbaahinta BBC ayaa laheyd barnaamij lagu magacaaabo The Black and White Minstrel Show – kaasi oo socday 20 sano intii u dhaxeysay 1958 ilaa 1978.
Markii ay soo bateen dhaqdhaqaaqyadii ka hortaga kala soocida mdibada kala duwan ayaa waxaa yaraaday madadaalooyiinkii lagu dhigi jiray “wejiga bunniga ah”islamarkana waa waqti xaadirkan loo arko ceeb iyo wax xun.
Balse ilaa iyo maanta dadka marsada wajiga calaamada madowga ah wali waa jiraan.
Maxay arrintan meel ka dhac u tahy?
Wajiga lagu xardho calaamada madowga ah waa meel ka dhac sababtoo ah waxaa si aan wanaagsanayn islamarkana meel ka dhac ah loola jeedo dadka madowga ah.
Arrintan ayaa waxay ku soo beegmaysaa xilli toddobaadyo uun ay ka harsan tahay doorashada dalka Canada.
Sawirka wuxuu siyaasad ahaan weji-gabax ku yahay ra’iisul wasaaraha sababtoo ah wuxuu sameeyay sharciyo wax ku ool ah oo arrimo sax ah ku saabsan.